ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အက်ဖ်အမ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ ကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက် ပါက လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု သတိပေး ~ Myaylatt Daily.
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အက်ဖ်အမ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ ကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက် ပါက လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟု သတိပေး
Ye Htut shared MOI Webportal Myanmar's post. မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
xxယင်းကျင့်ဝတ်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်၍ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက် များ အပေါ်မူတည်ကာ အမှားပြင်ဆင်ချက် ထည့်သွင်း ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုထံ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း၊ ကာလအပိုင်းအခြား သတ်မှတ်၍ အစီအစဉ်များ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းxxx
xxဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း ဘက်လိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအပေါ် ချိုးဖောက်ကျူးလွန် ပါကရွေးကောက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုကို မထိခိုက်စေရန် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလပြီးဆုံးသည်အထိ ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်ခွင့်များကို ချက်ချင်းပိတ်သိမ်းမည်ဟု သတိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း xx
MOI Webportal Myanmar added2new photos.
နေပြည်တော်- ဇွန် ၂၇
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ (Code of Ethics)နှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ရှင်းလင်းဆွေး နွေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းကို ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီက နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Forever Group Co. Ltd, Shwe Than Lwin Media Co. Ltd, မန္တလေး FM၊ ပဉ္စ၀တီ FM၊ ချယ်ရီ FM ၊ FM ပုဂံ၊ ပတ္တမြား FM၊ ရွှေ FM တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ချယ်ရီ FM ၏ Happy Time အစီအစဉ်နှင့် စိတ်မဆိုးကြေး အစီအစဉ်များတွင် မသင့်လျော်သည့် အသုံးအနှုန်း များ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ ရကြောင်း၊ အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးများ သည် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အပါအ၀င် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် FM အသံလွှင့်အစီအစဉ်များတွင်လည်း ရှိနေနိုင် ပါကြောင်းနှင့် ထပ်မံ၍လည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ကြောင်း။
သို့ဖြစ်၍ ယင်းဖြစ်စဉ်အပေါ်တွင် သင်ခန်းစာရယူကာ ရုပ်/သံလွှင့်မီဒီယာများ အနေဖြင့်လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ်ရေးဆွဲပြီး တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ ယင်းကျင့်ဝတ်များကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်၍ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက် များ အပေါ်မူတည်ကာ အမှားပြင်ဆင်ချက် ထည့်သွင်း ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုထံ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း၊ ကာလအပိုင်းအခြား သတ်မှတ်၍ အစီအစဉ်များ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုံနှိပ်မီဒီ ယာကဏ္ဍတွင် မည်သူမဆို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ခွင့်ရနေသည့် အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဝေဖန်မှု မရှိသော်လည်း ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု ကဏ္ဍတွင်မူ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် နေသည့် ရုပ်သံမီဒီယာများသာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိနေသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများ ထုတ်ပြန် ရာတွင် တရားမျှတမှု ရှိ/မရှိအပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများရှိနေကြောင်း၊
ထို့ကြောင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဘက်လိုက်မှု မရှိအောင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိန်းသိ်မ်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းများ ကို ဆောင်ရွက်ရာ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများက ရုပ်သံလွှင့် အဖွဲ့အစည်း အလိုက် အမြင်သဘောထားများကို တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီး အများ သဘောတူ သည့် ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲ၍ အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အတည်ပြုခဲ့သည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာ ရမည့် ကျင့်ဝတ်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ် များအဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီတစ်ခု၊ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအတွက် တိုက်ရိုက်သော်လည်း ကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော် ပေးရာရောက်သည့် ထုတ်လွှင့် မှုမျိုး မပြုလုပ်ရန်၊ ပါတီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းရုံး လှုံ့ဆော် သည့် ကြော်ငြာများ (Campaign Advertisement) ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရန်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက် များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)မှ ရေးသားထုတ်ဝေထား သည့် မြန်မာသတင်း မီဒီယာများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် စာအုပ် ပါ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များအား သိရှိလိုက်နာရန် တို့ပါဝင်သည်။
ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကာလအတွင်း မြန်မာ့ရုပ်မြင် သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်မည့်ပါတီများ၏ ဟောပြော ချက်များကို တူညီသည့် ထုတ်လွှင့် ချိန်များ အတိုင်း MRTV4, MNTV နှင့် FM များမှ ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင် ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခု အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က မြန်မာ့ အသံနှင့် ရုပ်မြင် သံကြားနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် နေသည့် ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း ဘက်လိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအပေါ် ချိုးဖောက်ကျူးလွန် ပါကရွေးကောက်ပွဲ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့်တရား မျှတမှုကို မထိခိုက်စေရန် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလပြီးဆုံးသည်အထိ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်များကို ချက်ချင်းပိတ်သိမ်းမည်ဟု သတိပေး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။